Izikhwele zokugqiba i-2016, ifoto. Esithendeni, isiteji, ngaphandle kwesithende, izicathulo kwi-prom.
Kulo mzobo wasukuhlwa ubonakala uhambelana, kufuneka ucingelwe ngokubhekiselele kwiinkcukacha ezincinci. Izicathulo ezikhethiweyo ezifanelekileyo ziza kwenza "udlale" ingubo ethobekileyo kakhulu okanye ngokuphambene nendawo, ilahle yonke into. Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo ekupheleni konyaka we-2016, ziphi izitayela kunye nemibala ngoku ifanethi iya kuxela inqaku lethu.
Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo kwi-prom. Sikhetha izicathulo zokugqweswa phantsi kweengubo
Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo kwi-prom
Ngaphambi kokuya kuthengwa, khumbula le mithetho elandelayo, abayi kukuvumela ukuba wenze iphutha:
Okokuqala isambatho siyathengwa, kwaye izicathulo zithathwa.
Iibhola kufuneka zihambelane nesambatho ngesitayela kwaye zihambelane nombala. Akunjalo ukuba ulungelelanise!
Izicathulo ekupheleni kwe-2016: iifoto
Iphulo: ukuba awuqinisekanga ngentsingiselo yakho, thabatha ingubo yokugqoka kunye nawe kwisitolo seesanti.
Izikhwele akufuneki zibe nombala ofanayo nebhegi.
Kufuneka ukhululeke! Le yimeko ebaluleke kakhulu. Khumbula ukuba uza kugqoka izicathulo zokugqibela okungenani iiyure ezili-10, ngelixa uhamba ngokunyanisekileyo.
Ukuba awukwazi ukuhamba ngesithende, khetha i-platform okanye ibhaltshi yakho.
Ngoku lixesha lokukhetha ibini lakho elifanelekileyo.
Sakhetha izicathulo zokugqweswa phantsi kweengubo
Ngoko, uthenge ingubo. Ukuba lide , i-A-shaped silhouette, "i-mermaid" okanye "i-princess" izitayela, emva koko umkhombe weklasi ene-hairpin ephezulu ikhethwayo. Kungcono ukuba i-monophonic okanye i-décor minimal.
Ukugqoka iingubo ezimfutshane kunye neengubo ezinamakhanda ezintle ezifanelekileyo. Ukuqhaqha okukhawuleza kukubangela ukuba ukhangele ngefestile. Iimpawu ezinamandla ngakumbi kwisithende esikhulu okanye i-wedge ephantsi ihlanganiswe ngokugqibeleleyo kunye neengubo ze cocktail okanye iimeko.
Akunakwenzeka ukuba ungakhankanyi umgangatho wonyaka - izicathulo kwiqonga. Njengomthetho, banesihlangu esikhetele kakhulu, nangona isithende esiphezulu. Utshintsho - iimodeli ezinezinyosi.
Ukugqwesa kwesi sambatho kuya kuba yizicathulo zobugcisa. Ukugqithisa kuyo kuya kunika ifomu engavumelekanga yesithende. Inokuthi igxinwe ngokukhawuleza ngaphakathi okanye ngaphandle, yenze umlinganiselo wejometri (umzekelo, unxantathu), ube nemingxuma, njl. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba iimpahla ezinjalo ziyi-background.
Imibala kunye nencoko
Nguwuphi umbala ongakhetha kuwo. Umnyama omhlophe uthathwa njengeklasi. Ziyonke kwaye zivisisana nazo zonke iintlobo.
Umbala we-nude uyingqayizivele ngokwenene. Izicathulo ze-beige zibukeka zenza imilenze ede kwaye idlulele, zidibaniswe nayo nayiphi na ingubo, ziyakwazi ukugqithisa ukuzithemba ngokugqithisileyo komfanekiso. Izicathulo zePudrovye zingaba yimizimba yamathambo kwaye zenziwe ngesikhumba esenziwe ngamakhanda (umzekelo, thabatha i-Christian Louboutin) imibala, ukungafani kwezithende okanye i-appliqués.
Kufanelekile ukunikela ingqalelo kwiimpawu eziqhelekanga kunye nezakhiwo. Iphetheni le-Leopard kunye nenyoka ngokudibanisa neqonga kunye nokubukeka kweenwele kwi-original original. Imihlobiso enemibala ehlukahlukeneyo ilungele ukuhlwa.
Abafundi abatsha abaphumelele kumaBakala 9 no-11 banako ukuthenga izicathulo ezihlotshiswe ngamacwecwe amacwecwe, ama-rivets, zippers, kunye namava okanye iintsiba. Ukugqithisa ngeenwele kunye neentyatyambo ezinokuzenza kwenza izicathulo zibukeke njengezinto zokugqoka.
Siyathemba ukuba emva kokufunda ukuphononongwa kwethu, ukujonga imifanekiso kunye neefoto, unokuzikhupha ezo zihlangu apho uya kuziva ngathi unkosikazi kwi-2016. Nangona ulahlekelwa yinqanawa, kuya ku soloko uthabathe inkosana enhle.
Imfashini yefestile ekhatywayo
Izicathulo zeMfashini ngeli xesha
Iindlela zokulawula indoda ethandekayo ngoncedo lwabaphathi bakhe
I-sauce enomhlaza kunye nama-mushroom
Isakhiwo sebhajethi yentsapho, ukugcinwa kunye nokunyuka kwintsapho
Ungayinqoba njani ukwesaba iindiza
Uthando lwamanxeba ru: kukubi kangakanani ukuthandana kwi-intanethi?
Ikhekhe leshokoledi kwi-prying pan
Imodebo ye-carbohydrate yokutya
Isaladi ye-celery nge-sauce ye-peanut
Iingcebiso zobuhlengikazi: ukuzisa ukutya okuncedisayo kwiintsana
Izixhobo zeMfashini zonyaka we-2009-2010